हृदयमा बसेका शाह सर
'घरमा कत्तिको पढ्छ यसले ?'
'क्या पढ्न्या छियो र ? खेल्याको खेल्याई छ', आमाले भन्नुभयो ।
आमाले मेरो बदमासीको झन् विज्ञापन गरिदिन लाग्नुभोजस्तो लाग्यो । म आत्तिएँ । मुटु बाहिर निस्किएलाजस्तो भयो । डरले हातखुट्टा लुगलुग भए । निधार रनक्क तात्तियो ।
आमाको बोली खस्न नपाउँदै सरले भने, 'पढ्ने खालको केटा हो, घरमा पनि ध्यान दिन सक्यो भने राम्रै हुन्छ ।'
'खोइ कस्तो खाले हो ? मास्टरलाई था'होला । स्कुल पठायाकै छौँ । घरमा पनि पढ्-पढ् भनेकै छौँ । हजुरकै हातमा छ । बन्या हो कि नबन्या ?', आमाले थप्नुभयो ।
सरले व्यक्त गरेका शब्दहरू हृदयमा छिरे । मेरो शरीरको तापक्रम ह्वात्तै घट्यो । अनुहार कमल फक्रेझैँ फक्रियो ।
पाँच वर्ष बितेर गइसकेका थिए । कक्षा ६ मा चढिसकेको थिएँ । घरको आँगनमा आएर मेरोबारे चासो राख्ने पहिलो शिक्षक थिए- शाह सर । 'केटो पढ्ने खालको छ', त्यतिका वर्षसम्म कसैले भनेका थिएनन्, शाह सरले भने । ‘शाह सर’ ले बोलेको यही वाक्य मेरो जिन्दगीको टर्निङ प्वाइन्ट बनिदियो ।
पाँच कक्षामा ए, बी, सी... पूरै भन्न मलाई मुस्किल थियो । फर्सीको भेट्नाे समातेझैँ मेरो देब्रेकान समातिन्थ्यो । दायाँ गालामा ‘इङ्लिस सर’को बायाँ हात चट्याङझैँ बज्रिएको अझैँ बिर्सिएको छैन ।
पाचँसम्मको टेबुल कण्ठ गर्न नसक्दा गणित सरले घुच्चुकमा बन्चरे हातले हानेको । सबैको अगाडि कुखुरो बनाएको । हुरीले जस्तापाता बजारेझैँ सरको हातबाट पहाडजस्तो गरुङ्गो लाग्ने गणित किताब, मेरो कलिलो अनुहारमा बज्रेको । आजका दिनसम्म पनि साइकलको चक्का घुमेझैँ कक्षाकोठाका यादहरू मेरो मानसपटलमा घुमिरहेका छन् ।
निम्नतम सिकाइ उपलब्धिबिना कक्षा चढाउनु चटके उत्पादन गर्नु न हो । केही नजानी कक्षा ६ मा पुर्‍याउनेहरू पनि चटके नै हुन् । कक्षा ६ मा पुग्ने अपेक्षा गर्नेहरू पनि चटके नै थिए । म त स्वयम् चटके नै भएँ । केही नजानी कक्षा ६ मा पुगेँ ।
५ कक्षासम्म फेल भएर पुगेँ कि पास भएर ? थाहा छैन । तर, ५ कक्षामा गणितमा फेल भएको राम्रैसँग थाहा छ । १३ नम्बर आएको थियो । गिल्ला राम्रै भएको थियो । तर, ६ कक्षा चढिहालेँ । चढ्न कठिन कहाँ थियो र ? चढिसकेपछि पो खेप्नुपर्छ आँधी ।
‘शाह सर’ स्थायी शिक्षक थिए कि अस्थायी, मलाई आजको मितिसम्म पनि थाहा छैन । तर, सिकाइका लागि उनले गरेको व्यवहार मेरो मानसपटलमा स्थायी भएर बाँचिरहेको छ ।
बाँसका खुट्टा बनाएर अग्लो भएको चटकेको प्रदर्शन धेरै पटक देखेको छु । केही समयको रोमाञ्चकतापछि चटकेको पैतालाले धुलो छुनैपर्छ । निम्नतम सिकाइ उपलब्धिबिना कक्षा चढाउनु चटके उत्पादन गर्नु न हो । केही नजानी कक्षा ६ पुर्‍याउनेहरू पनि चटके नै हुन् । कक्षा ६ पुग्ने अपेक्षा गर्नेहरू पनि चटके नै थिए । म त स्वयम् चटके नै भएँ । केही नजानी कक्षा ६ मा पुगेँ ।
शाह सरको पूरा नाम 'तेजनारायण शाह' थियो ।
मैले एक दिन सोधेँ, 'सर ! हजुरको घर कहाँ हो ?'
मलाई उनीसँग कुराकानी गर्न असहज लागेन । शिक्षकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने ममा यस्तो आँट कसरी आयो ?
सरले उल्टै मलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'सबैभन्दा बढी गाविस भएको जिल्लाको नाम थाहा छ ?'
'सामाजिक सरलाई सोध्न रे ! हा...हा...', सर जोड्ले हाँसे ।
'सबैभन्दा बढी गाविस भएको जिल्ला सप्तरी हो । ११४ वटा गाविस छन् । मेरो घर त्यही जिल्लामा पर्छ', हँसिलो तथा सरल भावमा उनले जवाफ दिए ।
श्याम वर्ण । करिब साढे ५ फिट उचाइ । खुट्टामा गोल्डस्टार जुत्ता । बायाँ हातको नाडीमा जापानिज ब्राण्डको घडी । बायाँबाट दायाँ फर्केको कालो कपाल । कपालमा सधैँ बास्नादार तेल घस्ने । कालो रङको कटन पाइन्ट । कहिले आकाशे त कहिले कलेजी रङको सर्ट । आहा ! चिटिक्क ।
स्थानीय शिक्षकको पहिरन घरमा र स्कुलमा उस्तै हुथ्यो । खासै मजा लाग्दैनथ्यो तर शाह सरको गेटअपले हामी सधैँ आकर्षित हुन्थ्यौँ । उनकाे गेटअपभन्दा सिकाउने शैली झनै सुन्दर थियो । मैले पनि सरको कपाल कोर्ने शैलीलाई अझै पनि पछ्याइरहेको छु । सिकाउने शैली सम्झिरहेको छु ।
हामीलाई मधेस भन्ने शब्द थाहा थिएन । हामी ‘शाह सर’ भनेर बोलाउँथ्यौँ ।
शाह सर कर्णाली अञ्चलको कान्छो जिल्ला कालीकोट आएका थिए । अधिकांश मधेसबाट आएका सरहरूले अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणितजस्ता अप्ठ्यारा विषयहरू पढाउने गर्थे । हाम्रो स्कुलका ‘शाह सर’ ले पनि कक्षा ६ र ७ मा विज्ञान र गणित पढाउँथे ।
हामीलाई क्यारिमबोर्ड र भलिबल खेल्न खुबै मन पर्थ्यो । टिफिन टाइममा भोकभन्दा खेल प्यारो लाग्थ्यो । क्यारिमबोर्ड र भलिबल ती विद्यार्थीले खेल्न पाउँथे, जो अलि झगडा गर्न सक्थे, जो सोझालाई हेप्न सक्थे, जो अलि बलिया थिए, जो अलि जान्ने थिए । रहर भएका तर अवसर नपाउने हामी धेरै हुन्थ्यौँ । समान अवसरको ढोका लगभग बन्दजस्तै थियो ।
पाँच कक्षामा ए, बी, सी... पूरै भन्न मलाई मुस्किल थियो । फर्सीको भेट्नो समातेझैँ मेरो देब्रेकान समातिन्थ्यो । दायाँ गालामा ‘इङ्लिस सर’को बायाँ हात चट्याङझैँ बज्रिएको अझैँ बिर्सिएको छैन ।
शाह सर टिफिन टाइममा कहिले भलिबल खेल्न खोज्थे त कहिले क्यारिमबोर्ड । हामी खेल्थ्यौँ तर खेल अनुशासन थाहा थिएन । खेल खेल्दा नियमको पालना गर्ने संस्कारको विकास ‘शाह सर’ ले नै गरेका थिए । कहिले एउटै टिममा भएर खेल्थ्यौँ त कहिले प्रतिस्पर्धी भएर । सँगै खेल्ने ‘शाह सर’ ले हाम्रो प्रकृति बुझिसकेका थिए । हामीबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भाव पनि बढाइदिएका थिए ।
मलाई अरु सरहरूसँग बोल्न मात्रै होइन, उनीहरू हिँड्ने बाटोमा हिँड्नसमेत डर लाग्थ्यो । तर ‘शाह सर’ हामी सबैको पहुँचमा घामजस्तै गरी झुल्किन थाले । हाम्रा समस्याहरू सुन्थे । कहिलेकाहीँ हाम्रै घर पुग्थे । नियमित स्कुल आउँथे । समयमै कक्षामा प्रवेश गर्थे । निकै सरल तथा इमानदार लाग्थ्यो हामीलाई । हामी सजिलै कसैलाई भन्न नसकेका हाम्रा कथा भन्न सक्थ्यौँ । हाम्रा दु:ख सुनिदिने ‘शाह सर’ नै थिए । सकेको उपयुक्त सल्लाह दिन्थे । ‘शाह सर’ शिक्षक मात्रै थिएनन् । शिक्षकभन्दा बढी त साथी थिए । खासमा असल एउटा मानिस थिए ।
विज्ञान पढाउँदा होस् या गणित, पाठ्यपुस्तकभित्र मात्र सीमित थिएनन् ‘शाह सर’ । ज्यामितीय आकृति पढाउँदा हलो, डालो र घरलाई अवलोकन गर्न लगाउँथे । ब्ल्याकबोर्डमा आयतनको चित्र कोरेर क्षेत्रफल निकाल्नुअघि आफ्नै कापीलाई नापेर क्षेत्रफल र परिमिती पत्ता लगाउन उत्प्रेरित गर्थे । नबुझेपछि ब्रेक टाइममा अथवा अन्य उपयुक्त समयमा सिकाउन खोज्थे । कहिलेकाहीँ आफू बस्ने घरैमा बोलाउँथे । हामी उत्साहित भएर जान्थ्यौँ ।
सिकाएको जानेजस्तो पनि महसुस हुन्थ्यो । बुझेकाले नबुझेकालाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्थे । यति सिकेपछि भलिबल खेल्ने ! उति सिकेपछि क्यारिमबोर्ड खेल्ने ! खेल्न भनेपछि हुरुक्क हुने हामीलाई सरले सजिलै फकाउन र काम दिन जान्नुभएको थियो । समूह पढाउँदा होस् या तथ्यांकशास्त्र पढाउँदा, हामीले जानेको खेलकै उदाहरण दिएर सिक्न सजिलो बनाउनुभएको अझै याद छ । कक्षाकोठाभित्रै भएका भौतिक चीजहरू र आफ्नै शरीरका अंगहरूलाई गणितसँग जोड्थे । हामीलाई बुझ्न पनि मजा आउँथ्यो । किताबको अभ्यास गराउनुअघि हाम्रो अनुभव सुन्न खोज्थे । आफ्नो अनुभव सुनाउँथे । अनि अभ्यास गराउँथे ।
के मैले लेखेको ठीक छ त ? शिक्षकले कति नम्बर दिए होलान् ? सबैभन्दा बढी कसकाे नम्बर आयो होला ? अरुको किन बढी अंक आयो होला ? मेरो किन आएन ? लेख्न त लेखेकै हुँ नि ! यी र यस्ता परीक्षा सकिएपछि हरेक विद्यार्थीको मनमा उठिरहने प्रश्नहरू हुन् ।
‘शाह सर’ स्थायी शिक्षक थिए कि अस्थायी, मलाई आजको मितिसम्म पनि थाहा छैन । तर, सिकाइका लागि उनले गरेकाे व्यवहार मेरो मानसपटलमा स्थायी भएर बाँचिरहेको छ ।
अरु शिक्षकले कापी चेक गरिसकेपछि कक्षामा नम्बर सुनाउने गर्थे । तर ‘शाह सर’ ले त्यसो कहिल्यै गर्नुभएन । हामी सबैका सामु कापी चेक गर्थे । सायद विद्यार्थी संख्या कम भएर पनि होला । सायद हामीसामु पारदर्शी बन्नका लागि होला । गल्ती भएको ठाउँमा रातो चिह्न लगाइदिन्थे र ठीक उत्तर के हो बताइदिन्थे । कसले लेखेको ठीक छ, त्यो पनि बताउँथे । यसरी बताएको कुरा दिमागमा लामो समयसम्म बसिरहँदो रहेछ । सरले कापी चेक गर्दै गर्दा सानो त्रुटिले नम्बर गुमेको हेरिरहँदा मन कटक्क हुन्थ्यो । अर्को परीक्षामा गल्ती कम गर्ने र राम्रो अंक ल्याउने संकल्प लिन मलाई धेरै सहयोग पुग्थ्यो ।
यिनै सानासाना लाग्ने ‘शाह सर’का विशेषताले मलाई बिस्तारै पढाइतिर आकर्षित गर्‍यो । कक्षा ६ मा दोस्रो भएँ । मेहनत गर्ने ऊर्जा झन् बढेर आयो । कक्षा ७ मा पहिलो भएँ । सापेक्षित मेरो प्रगति देखेर मलाई पढाइमा ‘लद्दु’ भन्नेहरू जिल्ल परे । धन्यवाद ‘शाह सर’ ।
माओवादी द्वन्द्वकाल चरम उत्कर्षमा थियो । कक्षा ७ पासपछि हामी मधेस झर्‍यौँ । समयको चर्खा घुमिरह्यो । बालापन पनि निख्रिँदै गयो । ‘शाह सर’ को शैली र उनले ममा भरेको ऊर्जा कहिल्यै रित्तिएर गएन । मलाई सबैभन्दा कठिन लाग्ने, नजानेर धेरै पिटाइ खाएको विषय गणित थियो । कक्षा १० पास भएपछि मैले गणित विषय नै पढेँ । गणितप्रति रुचि बढ्यो । सजिलो पनि महसुस भयो । धन्यवाद ‘शाह सर’ ।
अहिले आएर फेरि सिक्दै छु स्थानमान तालिकाको रहस्य । गणितीय आधारभूत क्रियाको खेल । ५ कक्षाभित्र लगभग यी सबै कुरा बालबालिकालाई सिकाउनुपर्ने पाठ्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, शिक्षकहरू आफूले घोकेर पढेको शैलीलाई नै पुनारावृत्ति गरिरहेका छन् । सयौँ शिक्षकहरू अवधारणा सिकाउनेभन्दा पनि कोर्स सक्ने दौडमा छन् ।
सोच्छु, १६ वर्षअघिका ‘शाह सर’ सिकाउने शैलीमा क्रान्तिकारी नै थिए । उनलाई न नामको लोभ थियो, न शक्तिको । कुनै दलको छातामुनि झण्डिएर दूषित पनि थिएनन् । तर, विद्यार्थीको हृदयमा भने अझै झण्डिइरहेका छन् ।
सायद ‘शाह सर’ले मलाई भुलिसके हाेलान् । तर, मेरो मानसपटलमा गुञ्जिइरहने उनको सिकाउने शैली हो । शैली कसरी भुल्न सकिन्छ र, हृदयमा जो गढेर बसेको छ ।
के तपाईंको शिक्षण शैली शाह सरको जस्तै छ ? के १६ वर्षपछि तपाईंलाई सम्झिने विद्यार्थी निर्माण गरिरहनुभएको छ ? आफैँलाई सोधौँ । जवाफ आफैँसँग छ ।
‘शाह सर’ को सम्पर्कमा तपाईं हुनुहुन्छ भने '१६ वर्षअघिको तपाईंको कालीकोटको विद्यार्थीले सम्झिँदै तपाईंको शिक्षण शैलीको प्रशंसा गरेकाे छ' भन्दिनुस् है !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १८, २०७७, ०८:२१:००